जाडोको खानपान - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
जाडो छल्न बाक्ला पहिरन आवश्यक हुन्छन्, तर कपडाले शरीरको बाहिरी भाग मात्र तताएर हुँदैन, भित्री भाग पनि तात्नु जरुरी छ । भित्रैबाट गर्मी निकाल्न पोसिला खानेकुरा खानुपर्छ । भित्री रूपमा शरीर तातो भएन भने हामीलाई रुघाखोकीले दु:ख दिन सक्छ ।
जुनेलोको रोटी जाडोको उपयुक्त परिकार हो । यसमा प्रोटिनको मात्र बढी हुन्छ । त्यसका साथै शरीरलाई आवश्यक क्यालसियम, आइरन, म्याग्निसियम, फाइबर भिटामिन बी तथा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि प्रशस्तै हुन्छ ।
बदामका अनेकन् गुण छन् । यसको नियमित सेवनले धेरै किसिमका रोगबाट जोगिन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । जाडोमा कब्जियतको समस्या बढ्छ । यो समस्या कम गर्न बदाम उपयोगी हुन्छ । बदामले मधुमेह नियन्त्रण गर्नसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ ।
अदुवा एउटा अत्यन्त उपयोगी मसला हो । यसको नियमित सेवनले साना–ठूला रोग लाग्न नदिने क्षमताको विकास गर्छ । यसले शरीरमा तातोपन बढाएर खाना पचाउनसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ ।
आर्युवेदमा महलाई अमृतसमान मानिएको छ । जाडोमा मात्र नभएर यसको दैनिक सेवन सबै मौसममा फलदायक हुन्छ । मह विशेष गरी रुघाखोकीमा लाभदायक हुन्छ । महको नियमित सेवनले पाचन शक्ति बढाउनुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासमेत वृद्धि गर्छ ।
माछामा प्रशस्त मात्रामा ओमेगा थ्री फ्याटी एसिड पाइन्छ, यो एसिडले जाडोमा शरीरलाई तातो बनाउँछ । ओमेगामा जिंकको मात्रा पर्याप्त हुने हुँदा शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि भै रुघाखोकी लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
खानपानमा हरियो तरकारी प्रशस्त मात्रामा समावेश गर्नुपर्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति स्थापित हुन्छ । जाडोमा मेथी, रायो, चम्सुर, पालुंगो, काउली, मुला, सलगम, गाजर, लसुनजस्ता सागसब्जी प्रशस्त सेवन गर्नुपर्छ ।
तिल प्रयोग भएका खानाले शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छन् । खाने मात्र नभएर तिलको तेलले मालिस गर्दा पनि शरीर तातो हुन्छ । खोकी लागेका बेला तिलसँग मिस्री मिसाएर सेवन गर्दा त्यसले कफ निकाल्छ । यसमा प्रोटिन, क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेडजस्ता तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
जाडोमा सुप अति नै उपयोगी हुन्छ । गाजर, मुला, च्याउ आदि विभिन्न सागसब्जी वा खसी, कुखुरा आदिको मासुको सुपले चिसो कम गर्न मद्दत गर्छन् ।
प्रकाशित :मंसिर ९, २०७५
जाडोको के मनपर्छ, के मन पर्दैन ?
पुरुषमा हाइपरटेन्सनको खतरा
फागुन २४ देखि ३० गतेसम्मको राशिफल
माघ ११ देखि १७ गतेसम्मको राशिफल
दसैंका लागि स्वस्थ्य खानपान
लभ बाइट्सका रोमाञ्चक पक्ष कार्तिक २७, २०७६
विश्व मधुमेह दिवस कार्तिक २७, २०७६
महिलामा यौनांग चिलाउने रोग, कारण र समाधान कार्तिक २३, २०७६
मुटु रोग र रक्तचाप कार्तिक १५, २०७६
चिसोबाट जोगिन के गर्ने ? कार्तिक ११, २०७६
महिनावारीमा प्याड कि रुमाल ? कार्तिक ६, २०७६